Ireo Krizin’i Darfur: Miteny Ireo Blaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2018 13:13 GMT
Ny Sleepless in Sudan, blaogy iray an'ny mpiasa mpanao asa soa ao Darfour no mety ho azo ampitahaina amin'ny tomponandraikitra voalohan'ny tontolombolongana mikasika ny fiainana ao Darfour mifototra amin'ny fitantaràna voalohany./ mivantana Nosoratan'ny vehivavy iray mpiasa mpanao asa soa, ahitana an'ireo tatitra manara-potoana mikasika an'ireo trangan-javatra ao Darfour izy io. Ity lahatsoratra ity izay navoaka efa ho roa herinandro lasa izao dia mitaraina hoe mbola mitohy hatrany ireo fanafihana ao Darfour.
Ny Sleepless in Sudan dia manadihady koa sy mitatitra momba ireo vokatra kely mahomby azo ao Darfur, sahala amin’ny fiverenan'ny masoivoho iray mpitondra fanampiana ao amin'ny toby ary ny andiana fahafito sady farany amin'ireo fifampidinihana momba ny fandriampahalemana izay nalahatra ho atomboka ao Abuja.
Ny blaogy, But That’s Just My Opinion, dia manana fijery somary mankahala mikasika ny fifandonana ao Darfur, mahita an'io ho sahala amin'ny fironana efa hatry ny ela tao Sodàna – maniry hametraka ny fijeriny sy ny lanjany amin'ny Afrikàna mainty maro an'isa ireo Arabo vitsy an'isa. Lazainy fa:
Sodana: mirona mankany amin'ireo fifampiresahana hisian'ny fandriampahalemana ao Darfur, izay tokony hanomboka ao Abuja ny The Passion of the Present.
Manontany ny blaogy Octogenarian hoe “Darfur: Aiza ny fahatezeran'ireo Amerikana Mainty.” Ahitana ihany koa ny fizaràna Afrika-Arabo mainty ao Sodana na izay antsoiny hoe “singa fototra ara-poko” amin'ny fifandonana, mifanamby amin'ireo mpitondra Afrikana-Amerikana ny Octogenarian fa hampiakatra ny feo hanohitra ny ataony hoe “fandripahana faobe” ao Darfur: